Gbasara Anyị - Xiamen Pro Imp. & Exp. Co., Ltd.
Xiamen Pro Imp. & Ngosipụta. Co., Ltd.
OBORF e hiwere na 2014, Isi ụlọ ọrụ na XIAMEN na ụlọ ọrụ mmepụta ihe dị na AnPing Industrial Park, Hebei Province, mara dị ka Obodo nke China Waya Meshes. Na mbido, anyị na-arụpụta ma na-enye ndị ụlọ ọrụ ume ọrụ ikuku ikuku ikuku welded waya ntupu. Ma n'oge, anyị àgwà ngwaahịa na ọrụ natara oké aha na azụmahịa na-gbasaa na South Korea, Malaysia, Singapore, Canada, Brazil, UAE, Europe mba. Anyị ghọrọ ọkachamara emeputa nke ngwaahịa ngwaahịa, na-enye elu mma Welded ngere, Chain njikọ ngere, kpara Field ngere, ịghasa ikpo, Waya ntupu nkebi, Waya ntupu lockers, onu Trolley na ndị ọzọ. Anyị nwere ike ịnakwere OEM iji gboo mkpa gị.
Gịnị mere o jiri bụrụ ihe dị mma
Nkwa anyị bụ inye ngwaahịa dị elu. A na-emepụta ihe niile n'ụzọ kwekọrọ n'ụkpụrụ Japan Quality Assurance Organisation (JQA). Anyị na-anabatakwa nyocha nke ndị ọzọ site n'akụkụ gị ma ọ bụ nye akwụkwọ asambodo dịka Canadian General Standards Board (CGSB), American Society for Testing and Materials (ASTM) wdg.
Anyị management nwetara na akara nke na-emepe emepe na erekwa metal ngwaahịa n'elu 10 afọ ma nye ọkachamara ngwọta na ahịa na-ekpuchi Japan, South Korea, Malaysia, Dubai, UAE, French, Dubai, Canada, USA wdg Karịsịa, anyị na-ezi imekọ ihe ọnụ na imirikiti ụlọ ọrụ Japan na ihe karịrị 3,000,000m ngere e zigara Japan site na ụlọ ọrụ anyị. Anyị nwere ahụmahụ iji dozie nsogbu dị iche iche nwere ike ime mgbe ị na-ahọrọ na ịwụnye nsu.
Anyị na-achịkwa njikọ mmepụta niile site na ihe ịzụta-ịgbado ọkụ-ekwe-mkpuchi-mbukota ruo mgbe ị na-enyefe ndị ahịa. Anyị na-eme ka anyị nwee ike ịnye ọnụahịa dị ala karịa ogo ogo ya.
Anyị na-emekọ ihe ọnụ na mba n'ihu iji hụ na anyị na ngwaahịa nwere ike ịnapụta ndị ahịa rụọ ọrụ nke ọma.
Ebe ọ bụ na ụlọ ọrụ anyị guzobere na 2014, anyị gara ihe karịrị ngosi 30 karịsịa na mpaghara Japan, Canada, Dubai na mba ndịda Ebe Ọwụwa Anyanwụ Eshia. Anyị na-egosi na anyị na ngwaahịa na ọhụrụ imewe nile ngosi. Imirikiti ndị ahịa anyị nwere ekele maka ọrụ anyị ma mejuo ngwaahịa anyị na ngosi ahụ wee soro anyị na-emekọ ihe ọnụ. Ugbu a, ndị ahịa anyị mgbe niile abawanyewo na 120.